Mutungamiri Duterte: Kana iwe usiri kuda kubaiwa jekiseni, enda kujeri kana kubva kuPhilippines!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Mutungamiri Duterte: Kana iwe usiri kuda kubaiwa jekiseni, enda kujeri kana kubva kuPhilippines!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Philippines Kupwanya Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kana iwe usiri kuda kubaiwa jekiseni, ndinokuita kuti usungwe uyezve ndobva ndapinza jekiseni mumaburi ako.
Philippines inogona kutanga kusunga vanhu vanoramba kuwana COVID-19 jab.
Duterte akapa vakuru vehurumende basa rekuzivisa avo vanoramba kupfurwa.
Kushomeka kwekushomeka kwakamanikidza guta guru renyika, Manila, kubvisa mutemo wekubaya 'no walk-in' neMuvhuro.
Mutungamiri wePhilippine, Rodrigo Duterte akaburitsa kushushikana kwake pamusoro pekuzeza kwejekiseni panguva yemusangano wedare remakurukota neMuvhuro manheru, achizivisa kuti anogona kutanga kukanda mutorongo vanhu vanoramba kuwana COVID-19 jab.
“Kana usiri kuda kubaiwa jekiseni, siya Firipaini, ”Duterte, akatsamwiswa nehutachiona hwakaderera hwenyika, akadaro.
“Enda kuIndia kana uchida, kana kumwe kuAmerica. Asi kwenguva yakareba uripo uye uri munhu uye uchikwanisa kutakura hutachiona, unofanirwa kubaiwa jekiseni. ”
Duterte akapa vakuru vehurumende basa rekuzivisa avo vanoramba kupfurwa. "Ndichairaira kuti vasungwe, kutaura chokwadi," akadaro. "Sarudza - kubaiwa jekiseni kana kuiswa mujeri?"
Duterte, uyo anozivikanwa nekushandisa mutauro wakanangana neyakajeka pamberi pevanhu, akambotaurwa achiti, "Kana iwe usiri kuda kubayiwa jekiseni, ndichakusunga uye ndobaya jekiseni mumabhudhi ako."
Kushomeka kwekushomeka kwakamanikidza guta guru renyika, Manila, kubvisa mutemo wekubaya 'no walk-in' neMuvhuro. Vakuru veguta reManila vakakoka vanhu zviuru makumi maviri nezviviri kunzvimbo dzekudzivirira nharembozha, asi vanhu zviuru makumi mana nezvina makumi mana nezviviri chete ndivo vakauya. Meya Isko Moreno vakati guta richadzokera kunzira yakavhurika-musuwo, uko chero munhu anogona kuratidzira pfuti.
Philippine Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire akataura kuti vakuru vematunhu nevemunharaunda vakarairwa kusimudzira kutonga kwemuganhu kupesana neiyo Delta musiyano, iyo yaimbozivikanwa semusiyano weIndia uye inopfuudzwa kupfuura dambudziko repakutanga rekoronavirus.
Philippines vatano vehutano vakanyora 5,249 128 mitsva mitsva uye 1.36 vakafa nezuro. Pakazara, vanopfuura mamirioni 23,749 vakatapukirwa necoronavirus, uye XNUMX vakafa.
Kubva Mugovera, chete 2,210,134 111 maPhilippines kubva paXNUMX miriyoni vakabaiwa zvakakwana.